Faah faahin:-Dagaalo ka dhacay Gobolka Shabeellaha Hoose – XAMAR POST
Faah faahin:-Dagaalo ka dhacay Gobolka Shabeellaha Hoose
By Zakariye iiman On Aug 8, 2019
Dagaalada oo aad u cuslaa ayaa shalay Gelinkii dambe iyo xalay waxaa ay ka kala dhaceen degmada Awdheegle iyo deegaanka Bariire ee Gobolka Shabeellaha Hoose,waxaana uu u dhaxeeyey Ciidamada Dowladda Soomaaliya ee dhawaan degmadaasi iyo deegaannada kale kala wareegay iyo Ururka Al-Shabaab.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii ay Al-Shabaab weerareen Saldhigyada Cusub oo Ciidamada Dowladda ay ka sameesteen degmada Awdheegle,waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in uu dhacay dagaal culus oo mudo saacad ka badan socday.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada xoogga dalka ayaa waxaa ay sheegeen in Al-Shabaab ay doonayeen inay dib ula wareegaan degmada Awdheegle, hayeeshee Ciidamada DANAB oo ku sugan halkaasi ay iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhinaca Al-Shabaab.
Al-Shabaab oo dhankooda ka hadlay dagaalkaas ayaa Baraha ay Internet-ka ku leeyihiin waxaa ay ku qoreen inay Gaari Cabdi Bille ah gubeen intii uu socday dagaalka u dhaxeeyay iyaga iyo Ciidamada dowladda, hayeeshee aysan jirin ilo madax bannaan oo xaqiijinaya warkaas.
Dhinaca kale Al-Shabaab ayaa xalay waxaa ay weerar ku qaadeen Saldhig Ciidamada Uganda oo qeybta ka ah AMISOM ku leeyihiin deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose oo dhowr bilood ka hor lala wareegay,waxaana halkaasi ka dhacay dagaal,sida ay dadka deegaanka sheegeen.
Dagaalka ka dhacay deegaanka Bariire ayaanan ilaa iyo hadda laga heyn wax faah faahin ah,waxaana Wararkii ugu dambeeyay ee saakay naga soo gaaraya deegaannada lagu dagaalamay ay sheegayaan in Ciidamada Dowladda dhaq dhaqaaqyo ka wadaan,isla markaana ay ku doonayaan inay kula wareegaan deegaano kale.
Maxay kawada hadleen Taliyaha Cusub ee AFRICOM iyo Ra’iisul Wasaare Kheyre
Akhriso:-Shaqaalaha dowladda oo la fasaxay saddex maalmood